के गर्छन् त केटाहरु साँचो माया पाएपछि ? - IAUA
के गर्छन् त केटाहरु साँचो माया पाएपछि ?
ramkrishna October 16, 2017	के गर्छन् त केटाहरु साँचो माया पाएपछि ?
थाहा नै छैन हामी प्रत्येक दिन कति जनासंग भेट्छौ कतिसंग कुरा गर्छौ तर माया एक जनासंग मात्र गर्छौ । माया भनेको एउटा यस्तो फिलिङ्स हो जुन फिलिङ्सलाई शब्दमा बयान गर्न जसलाई पनि हम्मे हम्मे पर्छ । यदी कसैले कोही संग माया गर्छ भने उसको जीवनमा केही न केही परीवर्तनहरु आउछन् ।
जब केटी कसैको मायामा पर्छन उनीहरु मायामा के के गर्न सक्छन् भनेर धेरै कुरा लेख्न सकिन्छ । तर तपाइहरुलाई थाहा छ जब कोही केटा कुनै केटीको मायामा परेपछि के के गर्छन् भनेर ?
आज हामी तपाइहरुलाई ६ वटा कुराहरु बताउछौ जुन कुराहरु केटाहरुको कसैको साचो माया पाउनको लागि गर्छन् ।
१ कसैसंग साँचोमाया भएपछि केटाहरु बेकारको कुराहरु गर्न छोडिदिन्छन् । उनीहरु आफ्नो पार्टनरसंग बसेर भविष्यका कुराहरु गर्न मन पराउछन् ।
२ साँचो माया पाएपछि केटाहरु यो कुरालाई कसैको अगाडी लुकाउन चाहादैनन् । साथीहरु , भाई ,बहीनीहरुसंग आफ्नो पार्टनरलाई भेटाउछन् ।
३ . माया बसेपछि केटाहरु केटीको परिवारसंग भेट्नर उनको परिवारको बारेमा जान्नको लागि आतुर हुन्छन् ।
४.केटाहरु भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुन्छन् ।यसको बारेमो कुरा पनि गर्छन् ।
५ जव कोही केटाको साँचो माया बस्छ त अचानक केटाहरु चाहिएको भन्दा बढी केयरिंग हुने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो मायालुलाई केहि चिन्ता नहोस भन्ने तिर नै सोचीराखेका हुन्छन् ।
६.माया बसेपछि अचानक केटाहरुको केटीप्रती विश्वास बढ्न थाल्छ ।
Previous Previous post: यी लक्षण भए ढुक्क हुनुहोस् तपाइँलाई उनले माया गर्छिन्
Next Next post: दैनिक कति पानी पिउनु स्वास्थको लागि उपयुक्त हुन्छ ?